UMLINGISI woZalo uNompilo Maphumulo odlala indawo kaNosipho okuthiwa ukweleta imali kamashonisa. Isithombe: FACEBOOK/NOMPILO MAPHUMULO
Khethukuthula Sangweni | September 20, 2021
USENKINGENI umlingisi womdlalo Uzalo, uNompilo Maphumulo, olingisa indawo kaNosipho ongumashonisa. Kuthiwa ukweleta umashonisa imali ecela kuR25 000 noma ngaphezulu ayeyithatha izicagogwana ngenkathi exinekile.
Umashonisa uSbu Ntombela waseNanda, eThekwini, uthi uNompilo ubebuya amagemugemu kuyena ezoboleka imali ekhala ngokuthi isimo siyabheda.
UNtombela uthi uNompilo uke wakhala ngokuthi bamile ekuqopheni iziqephu zoZalo bengaholi, nokuyinto eyamshaya kakhulu emalini.
“Ngike ngasebenza kuZalo mina ngingumlingisi owengeziwe, ngangizama ukumcela sikhulume eceleni, avele engabi nasikhathi athi uzokhokha kodwa lutho imali. Ngiyazi nokuthi uyaqashwa kweminye imisebenzi ayithole imali kodwa akangikhokheli sekuze kwangena nomama wami kulolu daba,’’ kusho uNtombela.
Uzalo luke lwama ukuqopha ngenxa yeCovid-19, lokhu kwashaya kwezwela kubalingisi kubalwa naye uNompilo.
Ngenkathi ethintwa uNompilo, ubengalubambi ucingo wathumela umyalezo wokuthi akuthintwe umashonisa uzocacisa. UNtombela ethintwa uthe usethole ucingo oluvela kuNompilo emncenga ukuba kuvinjwe udaba ephephandabeni, lungaphumi.
Emuva kwalokho uNompilo uthinte intatheli wathi sebexoxile nomashonisa, wayicela ukuba iluyeke udaba.
“Sinesivumelwano nabo kusho ukuthi kube khona ukungaxhumani kahle okuholele ekutheni udaba luze lufike kini. Ngikhulumile nabo izinto zikahle phakathi kwethu elami lokugcina lelo,’’ kusho uNompilo.
Ukhale ngokuthi uyinxusa lemikhiqizo ethile ezophatheka kabi uma imbona emaphephandabeni ngezindaba zezikweletu.
Intatheli ibuye yathintwa ngowesifazane othe ungunina kamashonisa wathi kade eshaye ucingo uNompilo ethi ucela kunxenxwe intatheli ukuba iluyeke udaba, bese beyaxoxisana.
Uzalo ludla ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu kwiSABC 1 ngo-8.30 ebusuku.